कांग्रेस महामन्त्री कोइराला आईसीयुमा, विशेषज्ञ डाक्टरले उपचार गर्दै ! - नेपालबहस
कांग्रेस महामन्त्री कोइराला आईसीयुमा, विशेषज्ञ डाक्टरले उपचार गर्दै !
| २३:२८:३४ मा प्रकाशित
३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ । कोरोना संक्रमित महामन्त्री कोइरालालाई निमोनिया भएपछि अस्प्ताल भर्ना गरिएको हो ।
चावहिलस्थित ओम अस्पतालमा मंगलबार नै भर्ना गरिएका उनलाई आईसीयुमा राखेर उपचार थालिएको छ । कोरोना पुष्टि भएपछि घरमै होमआइसोलेसनमा बसेका उनलाई मंगलबारदेखि भने ज्वरो आएको थियो ।
अस्पतालका प्रबन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीका अनुसार महामन्त्री डा कोइरालाको अहिले सघन उपचार कक्ष अर्थात आईसीयुमा उपचार भइरहेको हो । “अस्पताल आएदेखि नै हामीले आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “अहिले उहाँको ज्वरो घटेर स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ ।” उनका अनुसार महामन्त्री डा. कोइरालालाई निमोनिया भएको छ ।
महामन्त्री कोइरालाको उपचारमा अस्पतालमा निर्देशक डा विश्वनाथ कोइरालाको नेतृत्वमा डा सुवोधसागर ढकाल र डा प्रमेशसुन्दर श्रेष्ठलगायतको टिम रहेको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक कार्कीले जानकारी दिए । केही दिनअघि महामन्त्री डा कोइरालालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
मेक्सिकोको एक रेष्टुरेन्टमा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा ११ जनाको हत्या ४ घण्टा पहिले
पूर्व विदेशमन्त्री मोक्तार मालीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ४ घण्टा पहिले
भारतमा ५० लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको ४ घण्टा पहिले
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश ५ घण्टा पहिले